श्रीमति अर्काको श्रीमानसंग सल्किने कारण यस्तो छ…? जानी राखौ - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनश्रीमति अर्काको श्रीमानसंग सल्किने कारण यस्तो छ…? जानी राखौ
श्रीमति अर्काको श्रीमानसंग सल्किने कारण यस्तो छ…? जानी राखौ
August 23, 2019 dhan kush मनोरन्जन
काठमाडौं । श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमान संग किन नजिक हुन्छन, जब आफ्नो श्रीमान हुदाँहुदैँ अरु कै श्रीमानसंग सल्किने गरेको पाइन्छ ।
बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमानहरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग सल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ सबैलाइ तेसो भन्न मिल्दैन तर खासगरी श्रीमान विदेश हुने महिलाहरु अर्कै पुरुषसंग मोज मस्ती गरि श्रीमानले विदेशमा दुख गरि कमाएको सारा सम्पति लिगेर अर्कै पुरुषसंग हिडेको हामि देख्न र सुन्न पाउछौ ! श्रीमान नेपाल मै भएको महिलाहरु पनि अर्कै पुरुषहरुसंग सल्केको देख्न पनि पाइन्छ ।हामीले देख्ने गरेका छौं कतिपय महिलाहरु अर्काका श्रीमान प्रति आर्कषित हुने गर्छन । आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमान ताक्छन ? बिशेषत् वैदेशिक रोजगारीका शिलशिला विदेश गएका श्रीमानका श्रीमतिहरुमा यस्तो नकरात्मक असर देखिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पारिवारिक रुपमा विभिन्न समस्याहरु निम्तिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन । श्रीमान विदेशमा रहेको मौकामा महिलाहरु परपुरुषसँग लागेका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन । आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन अर्थात परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्छन ? यसका विषयमा गहन अध्ययनको जरुरत छ ।
जापानमा भने अनौठो तथ्यको खुलासा भएको छ । कण्डम निर्माता कम्पनी सागमी गोमुले गरेको सवेक्षणका अनुसार जापानमा आधाजसो वैवाहिक सम्बन्ध सम्भोगरहित हुन्छन । आखिर किन भयो होला यस्तो ? कारण पनि निकै डरलाग्दो छ । जागिर गर्ने श्रीमतीहरुले बाहिरै परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेकै कारण लोग्ने स्वास्नीबीच सेक्स नहुने गरेको तथ्य सर्भेले खुलासा गरेको छ ।जापानका धेरै कामकाजी महिलाहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोग नगर्ने र कार्यालयको कामका सिलसिलामा भेट हुने पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने गरेकै कारण उनीहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोगका लागि तयार नहुने गरेका हुन । सर्भेक्षणमा सहभागी ५ सय जना ४० वर्षको उमेरका महिलाहरु मध्ये ११ प्रतिशतले परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने गरेको स्वीकारेका छन ।
त्यस्तै १२ प्रतिशतले आफ्नो लोग्ने भन्दा बाहिरको पुरुषसँग सम्भोग गर्न मन पर्ने जवाफ दिए । केही महिलाले नैतिक रुपमा परपुरुषसँगको सम्बन्धका बारेमा आफुले सोँच्न पनि नसक्ने बताए । १० प्रतिशतले त आफूले परपुरुषसँग राखेको सम्बन्धका बारेमा लोग्नेले थाहा पाउँछ कि भनेर निकै डराउने गरेको जवाफ दिए । परपुरुषसँग के माध्यमबाट भेटेर संसर्ग गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ३१ दशमलव ५ प्रतिशतले अफिसमै भेटेर यौनक्रिया गर्ने गरेको बताए ।
२४ प्रतिशतले इन्टरनेट मार्फत सम्बन्ध कायम गर्ने गरेका रहेछन् । अर्को रोचक कुरा त के भने साढे १८ प्रतिशत त आफ्नो भूपू ब्वायफ्रेण्डसँग सम्भोगमा मग्न हुँदा रहेछन् । परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेकै कारण आफ्नो श्रीमानसँग सम्भोग नगरेको कति वर्ष भयो भन्ने प्रश्नमा ६३ प्रतिशतले ११ वर्ष भयो भन्ने जवाफ दिए । त्यसरी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने मध्ये ६८ प्रतिशतले यस्तो सम्बन्धका कारण आफुलाई कुनै पश्चाताप नरहेको बताए ।
अन्जान मान्छेले दिए १ बोरा पैसा,पा *पी बाउको श्राप लाग्यो,बाउ भन्छन आमा छोराको संगै ला श आवोस